Kismaayo ay ka socdaan shirar albaabadu u xiran yihiin oo u dhaxeeya hoggaanka Jubbaland iyo dowladda Dhexe | Hadalsame Media
Home Wararka Kismaayo ay ka socdaan shirar albaabadu u xiran yihiin oo u dhaxeeya...
Kismaayo ay ka socdaan shirar albaabadu u xiran yihiin oo u dhaxeeya hoggaanka Jubbaland iyo dowladda Dhexe
(Kismaayo) 12 Maarso 2019 – Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soconaya kulamo gaar ah oo u dhaxeeya RW Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan oo loo yaqaano Axmed Madoobe.
Hoggaamiyaha Maamulka Jubbaland oo la aamisan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay iska horkeenka Maamullada iyo dowladda dhexe ayaa hadda u muuqda mid ka soo dabcaya go’aankiisa.
RW Kheyre oo shalay gaaray Kismaayo ayaa si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay waxaana hoggaamiyaha Jubbaland uu sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe waa haddii la xaliyo tabashooyinka maamulkiisa.
Golihii Isbahaysiga Maamullada ayaa u muuqda inuu burburay waxaana dowladda dhexe ee Federaalka u muuqataa inay wax badan ku guulysatay sidii ay u kala daadin lahayd hoggaamiyaasha Maamullada.
Wararka ka imaanaya Kismaayo ayaa sheegaya in xalay illaa maanta ay kulamo albaabada u xiranyihiin ay leeyihiin Ra’iisul Wasaaraha dowladda Federaalka iyo Hoggaamiyaha Jubbaland, lamana oga waxa shirarkoodu ku saabsan yihiin.
Previous articleFaahfaahin u saabsan weerar cir iyo dhul ah oo ka dhacay deegeen ururka Al-Shabaab gacanta ku hayaan
Next articleHooyo uu wiil kale uga dhintay shil dayuuradeed oo Axaddii suuxday markii uu mid kale uga dhintay shilkii dhowaa